एल.बी विश्वकर्मा शुक्रबार, भदौ १९, २०७७
अछामको यस घटना नेपाली पब्लिकले सार्वजनिक गरेको थियो । यसअघिको रिपोर्ट पढ्न यस लिंकमा जानुहोस् - दलितसँग प्रेम गरेकै कारण केशरीले गरिन् आत्महत्या, प्रेमी टमट्टालाई निर्घात कुटियो
आछाम– अछामको रामारोशन गाउँपालिका–२, बिरसैनका प्रकाश टमट्टालाई अन्तर्जातीय प्रेम सम्बन्धका कारण कुटपिट गरेपछि सिंगो परिवार नै तानवमा छ । उनीहरुलाई गाउँलेहरु अनेक खाले त्रास देखाएका छन् ।
भदौ १२ गते छोरा प्रकाशलाई कुटपिट गरेपछि आमा कला टमट्टा त्रासमा छिन् । त्यस दिन छोरालाई मरणासान्न हुने गरी कुटपिट गरेको देखेकी उनका आँखाहरु रसाई रहन्छन् । फेरि गाउँलेहरु आएर छोरालाई कुटपिट गर्लान् भन्ने डरले सताएको छ ।
‘अस्ति प्रकाशलाई कुट्यापछि डर लाग्दो छ, सर । काइँ अज आइकन छोरालाई हान्दिन्या हुनकी सोच्दो छौँ । निन पन लाग्दैन । रात पन क्याइ भरनाइँ, घरभित्त पसिकन कुटिदिन्या हुन की सोच्दो छु । अस्ति पर खेतौदो लिइकन कुट्या । निलडाम पण्या छन्,’ कलाले नेपाली पब्लिकसँग भनिन् ।
कुटपिट भोगेका प्रकाश टमट्टा चोटपटक देखाउँदै
मोबाइलको घण्टी बज्दा समेत डर लाग्ने उनी सुनाउछिन् । कसैले गाली गर्न फोन गर्यो होला भन्ने सोचेर डरैडरले कुरा गर्ने गरेको बताइन् । भदौ १५ गते केही युट्युबरहरु उनको घरमा पुगेका थिए । उनी सुरुवातमा डरले बोल्नै सकिनन् । ‘घरमा को हुनुहुन्छ ? तपाईंको छोरा कता हुनुहुन्छ ?’ भनेर सोध्दा घरका मुम्बई गएका भनिदिइन् ।
उनले सुनाइन्, ‘आजभोलि मोबाइलको घण्टी बज्यापन भइमान्दो सर । काइँ कोल्लेई गाली गर्न फोन गर्यो कि सोच्दो । डरैडरले फोन उठाउँछु । अस्ति याँ पत्रकार आयाका छिया । तापाईंका छोरा काँ छन् भनी सोध्या मुइले डरले बम्बै छन् सबै भन्या ।’
कुटपिटका कारण छोरा उठ्नसक्ने स्थितीमा छैनन् । दुई साना बालबालिका छन् । श्रीमानको केही वर्ष पहिले निधन भएको थियो । ‘प्रकाशका बा पहिलाई बितिगया । प्रहरीमा उजुरी दिनलाई पन कोही छैनन् । पल्ला घरको छोरा क्या भन्या हो ? सल्लाह गर्नु पण्न्या छ । ऊ क्या भन्या हुन् ? त्या पछाडि उजुरी दिनु पण्ला ।’
प्रजिअ भन्छन्, ‘मलाई थाहा छैन, म कोरोना रोकथाममा जुटेको छु’
यो घटनामा काठमाडौंका सडकमा चर्का नारा लगाउने दलित अधिकारकर्मीहरुले समेत चासो लिएका छैनन् । अझ अछामका सञ्चारमाध्यमहरुले सार्वजनिक वृत्तमा ल्याउन प्राथमिकता दिएका छैनन् । यद्यपी केही स्थानीय संघसंस्थाले घटनाको न्यायिक छानविनका लागि निवेदन दिने तयारी गरेका छन् ।
अछामका प्रमुख जिल्ला अधिकारी गोकर्णप्रसाद उपाध्यायसँग सम्पर्क गर्दा उनले उक्त घटनाका बारेमा आफूलाई कुनै जानकारी नभएको बताए । उनी आफ्नो ध्यान विश्वभर महामारीको रुपमा फैलिएको कोरोना भाइरस नियन्त्रणमा रहेको बताउँछन् ।
‘यस्ता घटनाहरु प्रहरीले हेरिरहेको छ । त्यहाँ बुझ्नुहोस् । मलाई यस घटनाको बारेमा त्यति जानकारी पनि छैन । हामी अहिले पूर्ण रुपमा कोरोना भाइरस रोकथाम तथा नियन्त्रणमा जुटेका छौं,’ प्रमुख जिल्ला अधिकारी उपाध्यायले भने ।
प्रकाशित मिति: शुक्रबार, भदौ १९, २०७७ १८:४२